Somaliland 31 sano ka dib!…W/Q:- Abdirisaq Sh Ali | HADHWADAAG NEWS
Home Maqaalo Somaliland 31 sano ka dib!…W/Q:- Abdirisaq Sh Ali
Hargeisa(HNN):-Waxaa dhawaan loo dabbaal degay sannad guuradii 31aad ee kasoo wareegtay markii Somaliland lasoo noqotay madaxbanaanideeda. Xaflado qurux badan ayaa lagu qabtay Hargeysa iyo dhamaan magaalooyinka Somaliland. Waxa sidoo kale laga damaashaaday badi dunida meelaha ay ku sugan yihiin bulshada Somaliland. Sawiro qurux badan, dad faraxsan, ciidamo gaardiyaya iyo dad qiiraysan ayaa la arkayay muuqaaladooda oo qabsaday TVyada iyo baraha bulshada. Waxa la sameeyay xaflado dawlad iyo mucaaridba. Xaflado inta Somaliland wada lihi ku faraxsanaayeen kuna faanayeen. Meelo aan beryihii hore aad looga xusi jirin ayaa doorkan laga dabaaldegay.
Wax ka yar bil iyadoo ay kasoo wareegtay damaashaadkaa iyo xafladahaasi, waxa ka danbeeyay dhacdooyin aan qurux badnayd. Dhacdooyin rajadii iyo farxadii bulshada reer Somaliland mugdi galinaya. Waxa halkii ugu sareysay gaadhay kala qaybsanaanta bulshada Somaliland. Waxa si aan qarsoonayn isku waajahaya beelo ku kala abtirsanaya dawladda iyo mucaaridka. Waxa isku hanjabaya qolyihii SNMta ahaa ee dalka usoo wada halgamay iyagoo la kala saftay reerahoodii. Waxa faan, cay, hanjabaad iyo carin isku wada dhalinyaradii mustaqbalka dalka lahaa oo waliba in badani jaamacado kasoo qalin jabiyeen. Waxa kala qaybsamay baarlamaankii la doortay oo waliba dagaal gacan ka hadal ahi ka dhex dhacay dhawr jeer. Waxaan maalin walba daawanaynaa oday dhaqameed iyo salaadiin iskaga jawaabaya TV-yada iyagoo aan afka ka dhawrayn qabiilka iyo qabyaalada foosha xun. Waxa la iskugu goodinayaa si anshaxa iyo asluubta ka baxsan. Hadalo xanaf leh oo bulshada kala kaxaynaya, colaadna hurin kara ayaan in badan maqlaynaa.
Waxaynu arkaynay mudaharaadkii dhawaan ka dhacay Hargeysa iyo sawirada aan qurxoonayn ee warbaahinta iyo baraha bulshada wareegayay. Runtii waxay bixinayeen sawir ka duwan Somalilandtii aan jeclayn. Waxan wada aragnay baaqyada qolyo ka baxsan Somaliland oo dawladda iyo mucaaridkaba lagu xasuusinayo in ay wada hadal wax ku dhameeyaan rabshadaha iyo iska horimaadkana ka dheeraadaan.
Waxaan arkaynaa xadhig loo gaystay saraakiil xisbiyada mucaaradka ah oo la xidhay. Waxa jira shakhsiyaad kale oo xidhan oo loo xidhay wax ay aaminsan yihiin oo qaarkood la qabtay iyagoo iska wata hawl maalmeedkoodii caadiga ahaa. Waxa hanjabaysa dawladda iyo booliska oo ina tusaya quwad iyo askar tiro badan oo dhoolatus ku samaynaya magaalada Hargeisa iyo meelaha kale ee loo tuhmayo mucaaridka.
Dooda ugu wayni waxay ka taagan tahay doorashadii madaxtooyada oo wakhtigeedu ku beegan tahay bisha 11aaad, iyo xisbiyada hadda jira oo wakhtigoodu ku egyahay bisha 12aad.
Muranada siyaasiga ahi Somaliland way soo mari jireen wakhtiyada ay soo dhawaato doorashadu waxayna iska ahayd dhaqan soo jireen ah. Waxa laakiin nasiib darro ah in dhaqankaasi sii socda 31sano ka dib dawladnimadii. Waxay ceeb ku tahay qaranimada. Waxay ceebku tahay hankii iyo himiladii shacabka daacadda ah. Waa nasiib darro inteeda leeg. Waliba ku darsoo madaxweynaha haatan xilka hayaa waa waayo arag usoo taagnaa dib u dhacii lagala kulmay muranadii Somaliland hadheeyay wakhtiyo kala duwan. Madaxwenye Biixi waa shakhsiga ugu waayo aragsan dhinaca Siyaasadda Somaliland marka la eego marxaladihii uu goobjoogga u ahaa. Muu ahayn kii maanta hortiisa murankan iyo foolxumadani ka taagnaan lahayd. Waxa muuqata in Madaxweyne Biixi ujeedadiisa u wayni ahayd in uu kursiga fuulo balse hadaladiisii iyo halgankiisii aanu ahayn mid uu ka daacad ahaa. May dhacdeen maanta in muwaadin loo xidhi lahaa fikir uu aaminsan yahay hadii daacadnimadaasi jiri lahayd. Hoostiisa kamay dhacdeen in awoodda dawladnimada la iskugu faano. Kamay suurto gasheen in uu u caddaalad u samayn kari waayo bulshada Somaliland. Wixii shalay uu ku dhaleecaynayay madaxweyne Cigaal, Madaxweyne Riyaale iyo mararkii Siilaanyo uu wax ka sheegayba muu faleen wax ka daran.
Somaliland waxay halkan kusoo gaadhay isku duubni iyo bulshada oo dhinacyada ka taagnayd taabba galkeeda una arkaysay wax ay wada leeyihiin. Waxay su’aali ka taagan tahay hadii Somaliland maanta la kala sheegtay ilaa intee ayay sii jiri kartaa inagoo og dhaqaale xumada iyo tabar darida dawladnimo ee jirta.
Previous articleGolihii Wakiiladu Ma Waxaa uu Isku Bedelay Goob Lagu Xagxagto Madaxda Qaranka.?
Next articleTaliyihii sirdoonka Iiraan oo shaqada laga eryay iyo labo sabab oo la hadal hayo.